Iimpawu zeZodiac: Uhlalutyo lweenkwenkwezi lweempawu zakho - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Uhlalutyo lwethu olubalulekileyo lweZimpawu ezili-12 zeZodiac kunye noBuntu babo
Funda malunga neempawu ezili-12 ze-zodiac zolwazi kwiimpawu zakho, imihla kunye nokuhambelana. Fumana ulwazi ngeenkwenkwezi ukuze uqonde ubuntu bakho kwinqanaba elinzulu.
Ngaba uyafuna ukufunda ngakumbi ngobuntu bakho kwaye ungubani kanye kanye? Ewe, iindaba ezimnandi kukuvumisa ngeenkwenkwezi kunokukunceda! Umqondiso ngamnye we-zodiac uhambelana nento ethile, ethi yona ichaphazele isimo sethu sengqondo kunye nesimo sengqondo. Kwaye, uphawu lomntu lubhalwe kwitshathi yabo yokuzalwa kwaye luchazwe yindawo yeLanga. Indawo yeeplanethi kunye neenkwenkwezi kwindalo yomntu echaphazela iimpawu zabo, iimpazamo kunye nokuhambelana. I-Astrologist yethu, uSusan Taylor, ulapha ukuze achaze indlela umlingiswa wakho kunye nendlela ophila ngayo echaphazeleka kobu bugcisa, ngaphandle kokuqhubeka, masifumanise ukuqonda kwakhe okungenakuphikiswa ukuba ungubani ngokwenene!
Luthini uphawu lwam lweZodiac? -Fumana eyakho ngokusekwe kumhla wokuzalwa kwakho, emva koko ucofe iprofayile yakho engezantsi ⬇️
Zithini iimpawu zodiacac?
Chonga umqondiso wakho ngokuzalwa kwakho
Iimpawu zobuntu bomqondiso ngamnye
Ukweliphi iqela lezinto?
Luyintoni uphawu lweenkwenkwezi lwanamhlanje? ♌ Leo ♌
Ixesha likaLeo lisuka Julayi 23-Agasti 22. Ukuba uzalelwe phantsi kwalo mqondiso, waziwa ngokuba nesisa, ufudumale, ube negunya, kodwa ngamanye amaxesha ungalalanisi. Ewe, ubuntu bukaLeo buthanda ukuba liziko lokuqwalaselwa, kodwa kunokuba nokuzithemba ngamanye amaxesha, ngakumbi xa bethandana.
-Fumanisa olona phawu lubalaseleyo lwesimboli nganye ye-zodiac -
Emva komqondiso ngamnye weenkwenkwezi kukho ibali kunye nomlingiswa osele echazwe kakuhle.
Zithini iimpawu zodiacac? -Ziyeyona nto iphambili ekuchazeni ubuntu
Kukho imiqondiso ye-12 ye-zodiac kwi-astrology yaseNtshona, kwaye nganye yazo ineempawu zayo. Kananjalo nganye nganye imela iqela leenkwenkwezi. Ewe, uphawu ngalunye luno impembelelo enamandla kubuntu bakho, izimvo, kunye neemvakalelo. Ngokuphonononga icandelo lokuvumisa ngeenkwenkwezi, uya kuziqonda nzulu ngawe, ikamva lakho kunye nokuba kutheni usenza izinto ngendlela ethile. Kulungile, ukuba nokuqonda oku kuya kuthi kukhokelele kwindlela eyanelisa ngakumbi.
Umqondiso ngamnye we-zodiac uhambelana nobushushu obuthile! Ewe yonke into enxulumene nobuntu bethu ixhomekeke kwiinkwenkwezi ezazisesibhakabhakeni xa wawuzalwa kunye nendawo yazo kwiitshathi zethu zokuzalwa. Amandla eenkwenkwezi, kunye nenyanga kunye nelanga, nawo athathelwa ingqalelo kulwakhiwo lobuntu bakho. Ngokwenyani, kunjalo indawo elikuyo ilanga lokuzalwa kwakho elimisela ikakhulu iimpawu neempazamo zakho.
-Fumana ukuqonda ngakumbi kumqondiso wakho ngokufunda eyakho 2021 horoscope -
Nalu ulwazi uphawu lwakho lwehoroscope olutyhila ngawe:
Ityhila amandla akho kunye nobuthathaka.
Ichaza into oyifunayo kubudlelwane.
Ichaphazela amathuba akho okufumana uthando.
Inefuthe kwinto oyithandayo nongayithandiyo.
Icacisa ukuba kutheni usenza ukhetho oluthile.
Ingelosi inombolo 333 enentsingiselo
Yeyiphi imihla yemiqondiso yezodiac?
Uphawu lukaJanuwari lwezodiac
Capricorn 22 kweyoMnga - 19 kweyoMqungu
NgoFebruwari uphawu lweenkwenkwezi
U-Aquarius 20 Januwari - 19 Februwari
Matshi uphawu lweenkwenkwezi
intlanzi 20 kweyoMdumba - 20 Matshi ♓
Umqondiso we-zodiac ka-Epreli
IiAries 21 Matshi-19 Epreli ♈
Ngamana uphawu lwezodiac
ITaurus 20 Epreli-20 Meyi ♉
Uphawu lwe-zodiac kaJuni
IGemini 21 Meyi - 20 Juni ♊
Umqondiso we-zodiac kaJulayi
Umhlaza 21 Juni - 22 Julayi ♋
Umqondiso we-zodiac ka-Agasti
Leo 23 kweyeKhala ukuya kowama-23 ka-Agasti ♌
Umqondiso we-zodiac kaSeptemba
Intombazana 24 kweyeThupha- 22 Septemba ♍
Umqondiso we-zodiac ka-Okthobha
23 Septemba-22 Oktobha
Uphawu lukaNovemba lweenkwenkwezi
23 kweyeDwarha - 21 eyeNkanga
Umqondiso we-zodiac kaDisemba
22 Novemba - 21 Disemba
Ngaba kukho imiqondiso ye-12 ye-zodiac okanye i-13?
I-Ophiuchus inyanzeliswa phakathi kweScorpio kunye neSagittarius, kunye nayo imihla iqala ngo-Novemba-Disemba-17. Abantu abazalelwe phantsi kwalo mqondiso banomdla, banomdla kwaye banomona. Ngaphandle komdla ojikeleze lo mbandela, U-Ophiuchus eneneni uliqela leenkwenkwezi, oko kuthetha ukuba ayilophawu olusemthethweni. Oku kuthetha ukuba ayiveli kwinkwenkwezi yesiko, egxile kumacandelo alishumi elinambini ahamba kulo iLanga ngonyaka.
Jonga uphawu lwakho olungezantsi ngolwazi oluthe kratya kubuntu bakho
Iimpawu zobuntu beAries:
Inamandla, izimisele kwaye inamandla.
Umsindo, ukungxamiseka kunye nokuziphatha ngokungxama.
Ukuhambelana kweAries :
I-Aries iyahambelana neSagittarius.
Indlela yokutsala iAries:
Yiba nesibindi uthathe umngcipheko.
Iimpawu zobuntu beTaurus:
Yomelele, iyasebenza kwaye ithembekile.
Iimpawu ezimbi zetaurus:
Unenkani, uyonqena kwaye uyonga.
I-Taurus iyahambelana neVirgo.
Indlela yokutsala iTaurus:
Vula intliziyo yakho.
yintoni imiqondiso yomhlaba
Iimpawu zobuntu bukaGemini:
Uhlekisayo, unomdla kwaye unobubele.
Iimpawu ezimbi zeGemini:
Ukuxhalaba kunye nokungaqiniseki.
Ukuhambelana kukaGemini :
IGemini iyahambelana ne-Aquarius kunye neLibra.
Uyitsala njani iGemini:
Yonwaba kwaye udlale ngothando.
Iimpawu zomhlaza womhlaza:
Iimpawu zomhlaza ezimbi:
Uvakalelo kunye nokuzingca.
Umhlaza uyahambelana neScorpio.
Ungawutsala njani umhlaza:
Nyaniseka kwaye unyaniseke.
Iimpawu zobuntu bakaLeo:
Umdlalo weqonga, ukuzithemba kunye nomlilo.
Iimpawu ezimbi zikaLeo:
Unomona kwaye unekratshi.
Ukuhambelana kukaLeo :
U-Leo uyahambelana neSagittarius.
Indlela yokutsala uLeo:
Iimpawu zobuntu beVirgo:
Iimpawu ezimbi zeVirgo:
Uhlalutyo kakhulu kwaye luqinile.
Ukuhambelana kweVirgo :
IVirgo iyahambelana neTaurus.
Uyitsala njani iVirgo:
Bonisa iimvakalelo zakho zokwenene.
Iimpawu zobuntu beLibra:
Unobubele, ulungelelene kwaye unobabalo.
Iimpawu ezimbi zeLibra:
Unamava kwaye awunazigqibo.
ILibra iyahambelana neGemini.
Uyitsala njani iLibra:
Iimpawu zobuntu beScorpio:
Ukuzimisela, ubuhlakani kwaye kugxilwe.
Iimpawu ezibi zeScorpio:
Ukujonga kunye nokukrokrela.
IScorpio iyahambelana neCancer
Uyitsala njani iScorpio:
Yiba nomdla kwaye ungaqondakali.
Iimpawu zobuntu beSagittarius:
Kuyahlekisa, kuyaphuma, kwaye kulungile.
Iimpawu ezimbi zeSagittarius:
Ukungakhathali kwaye kungakhathali.
I-Sagittarius iyahambelana nee-Aries.
Uyitsala njani iSagittarius:
Iimpawu zobuntu beCapricorn:
Ulumkile kwaye unamabhongo.
Iimpawu ezimbi zeCapricorn:
Ndineentloni kwaye ndinenkani.
ICapricorn iyahambelana neTaurus.
Uyitsala njani iCapricorn:
Bonisa ubukrelekrele bakho.
Iimpawu zobuntu buka-Aquarius:
Unobuhlobo, ulumkile kwaye uthembekile.
Iimpawu ezimbi ze-Aquarius:
Unenkani kwaye ugqithisile.
U-Aquarius uyahambelana neGemini.
Uyitsala njani i-Aquarius:
Iimpawu zobuntu bePisces:
Iimpawu ezimbi zePisces:
Uyonqena kwaye uziva kakhulu.
Iipisces ziyahambelana neScorpio.
Indlela yokutsala iiPisces:
Izinto ze-zodiac ziMlilo, uMhlaba, uMoya kunye naManzi: Ungowaphi?
Apha ngezantsi ziimpawu ezinxulumene nento nganye.
Iimpawu zomlilo - Aries, Leo, kunye neSagittarius
Abathandi, abanesibindi nabazimiseleyo.
Iimpawu zomoya - IGemini, iLibra kunye neAquarius
Ubuchule kunye nobugcisa.
Imiqondiso yomhlaba - ITaurus, Virgo, kunye neCapricorn
Isiseko kwaye siyinyani.
Iimpawu zamanzi - Umhlaza, iScorpio, kunye nePisces
Imangalisa kwaye inzulu.
Fumana iinkcukacha ezithe kratya kwividiyo yethu:
Fumana ikamva lakho kwi-Horoscope yangomso
Leliphi elona phawu liqhelekileyo lezodiac?
Ngaba i-taurus kunye ne-leo ziyavana
Olona hlobo luphucukileyo lwekhokho eluhlaza
ubuntu beli xesha